Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 02:52 Ingen kommentarer:
အယင်က အကျွန်ရို့မြို့မာ ယစ်ကေကဂေါင်းဆိုးရေ လူတယောက်ဟိခဖူးရေ။ တခြားတမြို့က သူကြိုက်တေ နဆမချေတယောက်လဲ ဆီးရုံမာကျလို့ဟိရေ။ ယင်းတိုင်သျှင်က ယစ်လာဂေ အပိုင်းမာ ပတ်ဘနာ ကော်နှက်တေ။ တရက်လေ့မဟုတ်၊ နှစ်ရက်လေ့မဟုတ်ဆိုခါ အကိုဝမ်းကွဲတယောက်က ထွက်ဘနာ နားဝတလုံး သတ်ပလိုက်တေ။ ယစ်ဖွေက ယင်းအကိုသေကို ကြောက်လေ့ ကြောက်တေဆိုခါ အသတ်တလုံးခံရစွာနန့် လဲလားခဘနာ သတိမရဖြစ်လားခရေ။
အမိသေတိ၊ အစ်မသေတိ ပြီးလာကတ်ဘနာ " လှဝေ..........လှဝေ" ဆိုဘနာ ကောင်း ခေါ်ကတ်တေ။ မရ.....လုံးဝ သတိမိနီရေ။
ယကေ ပဇောင်ပျင်ဖို့ရောင်....ဘေးနားကလူတိကို အကူအညီခေါ်ဘနာ ကုတင်တလုံးနန့်ထမ်းဘနာ ဆီးရုံကိုပို့ကတ်တေ။ ယင်းထမ်းရေအထဲမာ သူရို့အမျိုးထဲက အသက်အကြီး လပျိုကြီးတယောက်လေ့ပါရေ။
ဆီးရုံရောက်လားခကေလေ့ ကုတင်ထက်မာ လုံးဝသတိမရ။ အမိတိ၊ အစ်မတိ၊ တခြားလူတိ အမျိုးမျိုးပိုင်ခေါ်ကတ်တေ....တခုပိုင်လေ့ သတိမရ။
တာဝန်ကျ နဆမချေ ရောက်ပါလတ်တေ။ " ကိုလှဝေ....ကိုလှဝေ" ခေါ်လိုက်မာ...." အုံး.........ဆရာမချေလား" ဆိုဘနာ ချက်ချင်း သတိရလာရေ။
ဘေးမာ ရပ်ကြည့်နီရေ သူရို့အမျိုးလပျိုကြီးလေ့ မနိုင်မနင်းနန့်ထမ်းလာရစွာ ချွေးတောင်မတိတ်သိမ့်။ ယကေလေ့ အသာအယာ တခွန်းပြောဘနာ ဆီးရုံကပြန်ထွက်လားခရေ။
" အမိကလိုး....ဆီးရုံကပြန်လာကေ...မင်းကုတင်မင်း ကိုယ့်စွာကိုယ် ထမ်းလို့ လာလီဖိ" လတ်.....
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 03:10 Ingen kommentarer:
ဂျိုး........ကျော်...........ဂျိုးကျော်..........(၃) ထုပ်မှ (၁၀) တည်းရယ်. .....
တခါက ရခိုင်ပြည်က ကွန်မြူနစ်ပါတီအဖွဲ့တဖွဲ့ ရန်ကုန်ကို အစည်းအဝေးကိစ္စတခုနန့် လားကတ်တေလတ်.....တည်းဖို့အိမ်ကိုလေ့ ဒလမာ စီစိုင်ပီးထားရေလို့ပြောရေ။ ရန်ကုန်ဖက်ကမ်းကနီ ဒလကိုအလာ သင်္ဖောထက်မာ အောက်သမတယောက် စက္ကူထုပ်ချေတိကိုင်ဘနာ....
ဂျိုး........ကျော်...........ဂျိုးကျော်..........(၃) ထုပ်မှ (၁၀).....ဆိုဘနာရောင်းနီရေလတ်။ ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ၀ါကျီးတယောက် အသာချေ၊ တတိန်းချေ တယောက်တည်း တဆယ်ဖိုး (၃)ထုပ် ၀ယ်ယူခရေလတ်။
ဒလက တည်းဖို့အိမ်ကိုရောက်လို့ တခြားလူတိက အပြင်ထမင်းဆိုင်မာ ထမင်းစားဖို့လားကတ်ပါမေ အခင်ကြီးလို့ ခေါ်ခါ...မင်းရို့လားလီကတ်ဖိဝေး...ငါ ဒေမာ ဟိစွာချေနန့် ဆန်ဗူးလတ်လောက်ချက်ဘနာ ဟိစွာချေနန့် စားပလိုက်ဖို့ယာ ပြောဘနာ ကျန်ခရေလတ်။
ယကေ ကျန်ရေလူတိလေ့ အပြင်ထမင်းဆိုင်ကိုလားဘနာ စားပစ်ခီကတ်တေ။ စားပြီးသောက်ပြီးလို့ ပြန်ရောက်ကတ်တေခါ ယင်းအခင်ကြီးကို စားပြီးယာလား အခင်ကြီးလို့ မီးလိုက်ကတ်တေလတ်....
ခလိုးသမီး အောက်သမ........ငါက ဂြိုးသား ထင်ဘနာ ၀ယ်လိုက်စွာ။ ထမင်းခြိုးတိဂျေးယာ။ အားလုံးကို ဝေးသတ်ပလိုက်ယာငါ...................
(လူများပြောပြဖူးစွာကို တဆင့်ခံ ပြန်ဖောက်သည်ချလိုက်စွာပါ)
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 03:09 Ingen kommentarer:
ဖားချေဆိုရေအကောင် အလှပချေ ကလိမေချေတိမြင်ကေ အားလုံးကိုကြိုက်တေ....ရည်းစားစကား လိုက်ပြောရေ။ စစ်တွေကောလိပ်မာ ကျောင်းတက်နီယင်း ဘူးသီးတောင်က ကလိမေသျှေတယောက်နန့် ကြိုက်ကတ်တေ။ ယင်းကလိမေသျှေနန့် ကြိုက်နီကတ်ယင်း အရာ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ စစ်တွေ အစဟိရေမြို့တိက ကလိမေအလှပချေတိကိုလေ့ ကြုံကေ ကြုံရေပိုင် ကြဲစီကြဲစဲ သဂါလူးထားရေမျက်နှာနန့် ပိုးရေ။ ရည်းစားစကားလိုက်ပြောရေ။ ယင်းခေတ်က ဒေပိုင် အိန်တာနက်တိ၊ ဖုန်းတိမပေါ်သိမ့်ဆိုခါ သမီးရည်းစားတိ စာအပီးအယူလုပ်ရရေခေတ်သိမ့်။
ရည်းစားသေ။ ။ ဟိုက် ဖားချေ....နင် ယပိုင်ပွီနီဖို့ဆိုကေ နင်နန့်ငါလမ်းခွဲပလိုက်ဖို့ဗျာလ်....
ဖားချေ။ ။ နင် ခွဲဝံ့ကေ ခွဲလေ....နင့်ပါးက ပြန်ထားရေစာတိကို အားလုံးဘူးသီးတောင် သင်္ဖောမာ ကပ်ပလိုက်ဖို့ငါ....။
ရည်းစားသေ။ ။ ဟိုက်....ဖားချေ...နင် ယင်းပိုင် မစုတ်ပဲ့ကေနန်း။
ဖားချေ။ ။ နင်လေ့ မစုတ်ပဲ့ကေ့ ယကေ။
ရည်းစားသေ။ ။အေး ကောင်းယင့်....နောက် တခါ ရည်းစားထားလို့ ကြားပက်စီချ....
ဖားချေ။ ။ မထား......မထား....နင့်မာလေ့ လူများပြောစွာတိကို လိုက်ယုံနီရေ....ဟဲ...ဟဲ။
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 03:08 Ingen kommentarer:
ဖေ့စ်ဘုတ်မာ အဖိုးသျှင် ငပိရောင်းစွာကို မြင်လို့ စစ်တွေမြို့က ငပိရာဇ၀င်တခုကို အတွက်ပေါ်လားရေ။
အခင် ဦးလှဖြူ။ ဟိုင်း ငပိစကေ ကြည့်ကတ်မေဇံ ဆိုဘနာ ခေါ်လိုက်တေ။
ငပိသေမလေ့ သူ့ငပိစွံစီချင်ဇောနန့် သူ့ငပိဇာလောက်ကောင်းကြောင်းတိကို ပစကအမြှုပ်ထွက်အောင် ကြော်ငြာနီရေ။
အခင် ဦးလှဖြူ နားညိန်းလို့ မချိယာ...ယကေလေ့ တခုလေ့ ပြန်မပြောဘဲနန့် သည်းခံနီသိမ့်ရေ။
ငပိသေမလေ့ ကြော်ငြာနီယင်းနန့် နောက်ဆုံး ငပိကောင်းကြောင်းကို " အကျွန့်ငပိ မွှီးကမွှီးနန့်...ကြိုင်ခံနီယင့်" ဆိုဘနာ ပစက ထွက်ကျလားရေ.....။
ယကေ အခင် ဦးလှဖြူ ပေါက်ကွဲယာ...." ဇာပြောရေဟေ့....နင့်ငပိ မွှီးရေ...ဟုတ်လာ...မွှီးကေ နင့်ငပိကို မ၀ယ်ယာငါ...." ဆိုဘနာ အိမ်ထက် ပြန်တက်လားခရေ။
ငပိသေမလေ့ ကိုယ့်စကားနန့်ကိုယ် ငပိတောင်းချေထမ်းလို့ ခြံထဲက ပြန်ထွက်လားခရေ...။
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 03:07 Ingen kommentarer:
ဒုချီးရာတန်း၊ ကုလားရွှေမောင်၊ အနောက်အုပ်စု၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့
ဒုချီးရာတန်း၊ ကုလားရွှေမောင်၊ အနောက်အုပ်စု၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ ကြေးစားမီဒီယာ
ကုလားမနိုင် ရခိုင်မေး၊ ကုလားအကြောင်းကို ဗမာပြည်မှာ ရခိုင်လောက်သိတဲ့လူမျိုးတမျိုးမှ မရှိဘူး။ ကုလားတွေဘယ်လောက် ကျောက်ကျစ်ကလိမ်ကျတယ်ဆိုတာ ရခိုင်တွေအသိဆုံး။ အဲဒါကြောင့် ဒုချီးရာတန်းရွာကိစ္စမှာ အဓိကကြိုးကိုင်သူဟာ ရွှေမောင်ဘဲဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီရွာကလူတွေနဲ့ ရွှေမောင်နဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွယ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာ သူ့အင်တာဗျူးကိုနားထောင်ကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်။ သတင်းစာ၊ ရေဒီယိုမရှိတဲ့ ကုလားရွာမှာ အနောက်နိုင်ငံက သံတမန်တွေလာမယ်ဆိုတာကို ရွှေမောင်လိုအမတ်တယောက်ဖုန်းဆက်မပြောဘဲ အဲဒီရွာကကုလားတွေ ဘယ်လိုမှ သိနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ နောက်တချက်က ဘာမှမရှိတဲ့ သုံးလေးထောင်လောက်တန်တဲ့ အိမ်အခွံတွေကို မီးရှို့စမ်း။ အိမ်တလုံးကို တစ်သိန်းပေးမယ်ဆိုရင် ကုလားမှမဟုတ်ဘူး၊ ရခိုင်တွေ ဗမာတွေလဲ ရှို့မှာဘဲ။ ဒါမှမဟုတ် အနောက်နိုင်ငံက သံတမန်တွေလာကြည့်ရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့အိမ်တွေကို ရနိုင်တယ်လို့ ဖုန်းဆက်ပြောရင်လဲ ရှို့ကြမှာဘဲ။ အဲဒါကြောင့် ရွှေမောင်ဟာ အဓိက တရားခံဖြစ်တယ်။ အဓိက တရားခံ သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အာရုံလွှဲချင်လို့ ကုလားဥာဏ်နဲ့ ပြည်သူ့ရဲတွေကို ထိုးချပြီး လမ်းကြောင်းလွှဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကို အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရွှေမောင်လိုအကောင်ကို ရခိုင်တွေရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကို နိုင်ငံရေးအရ balance ညှိပြီး ထိမ်းထားနိုင်အောင် တမင်မွေးထားတာဖြစ်တယ်။
ဒုချီးရာတန်း ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေက မဟုတ်မှန်းသိလျက်နဲ့ အမျိုးမျိုးဝင်ရောက်စွက်ဖက်ချင်နေကြတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ သဘာဝအရင်းအမြစ်ကြွယ်ဝပြီး စစ်ရေးအရ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနေအထားကို သွားရည်တများများဖြစ်နေကြတယ်။ အထူးသဖြင့် တနေ့တခြား စီးပွါးရေး၊ စစ်ရေး အင်အားတောင့်တင်းလာတဲ့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယတို့ရဲ့အနေအထားကို စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့၊ ထိမ်းချုပ်နိုင်ဖို့ အတွက်ဖြစ်တယ်။ နောက်တချက်က အစ္စလမ်မစ်ဝါဒီတွေရဲ့ တနေ့တခြား အကြမ်းဖက်ပစ်မှတ်ဖြစ်လာတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်ကို အစ္စလမ်မစ်ပစ်မှတ်ဖြစ်လာအောင် အာရုံလွှဲတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
မြန်မာအစိုးရကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဘာသားရေးလွတ်လပ်ခွင့် စကားလုံးလှလှတွေကို အသုံးပြုပြီး ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ မင်းတို့နိုင်ငံတွေက လူ့အခွင့်အရေးတွေ၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ငါမေးမယ်။ မင်းတို့နိုင်ငံတွေကို လာခွင့်ရဖို့ တချို့တိုင်းပြည်ကလူတွေကို ဗီဇာမဲ့ခွင့်ပြုထားတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံက လူတွေကျတော့ ဗီဇာအပြင် ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးပြရတယ်။ ဒါ လူသားအချင်းချင်း ခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးလား? လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာ မဟုတ်ဘူးလား။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်၊ အစ္စလမ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ် ခလေးတွေကို စာသင်ကျောင်းအစီအစဉ်နဲ့ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေကို မသွားမနေရသွားရတာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်လား? မူဆလင်ခလေးတွေကို မူကြိုကျောင်းတွေမှာ ၀က်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ ကစားခိုင်းတာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်လား? လောလောစဉ် ဒါဘဲမေးမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သူတို့အလိုကျ လက်ဝေခံအစိုးရတရပ်ပေါ်လာဖို့ မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နေတာဖြစ်တယ်။ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အရှက်တရားကင်းမဲ့စွာ ပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ဆိုကတည်းက သိက္ခာကင်းမဲ့စွာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နေတယ်ဆိုတာ သိသာတယ်။ မင်းတို့နိုင်ငံတွေက တချို့ဥပဒေတွေကို မြန်မာနိုင်ငံက ပြင်ခိုင်းရင် ပြင်မလားမေးချင်တယ်။
ဒုချီးရာတန်းမာ ကုလားအကောင်(၄၀) လံကြုပ်သတင်းကို မရမက အမှေရှာပြီး ဟိုကလာစစ်လိုက်၊ ဒီက လာစစ်လိုက် လုပ်နေကြတယ်။ ကုလားနိုင်ငံတွေမှာ အကြမ်းဖက် အသေခံဗုံးခွဲလို့ လူတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရာနဲ့ချီ သေနေကြတယ်....မင်းတို့ သွားစစ်ရဲလား? မသွားရဲဘူး မလား?
နိဂုံးချုပ်လိုက်တော့မယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ သတိထားရမှာက အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေ၊ သန်းကြွယ်သဌေးတွေအနေနဲ့ သူတို့လိုချင်တာကိုရဖို့ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက်ဘူးဆိုတာ သတိထားဖို့လိုတယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံလို ကမ္ဘာလောက်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံကိုတောင် အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်လို ဇီးရွက်လောက်သာရှိတဲ့နိုင်ငံကို စရင်းထဲမှာတောင် ထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ညောင်သီးကိုလေ့ စားပါ။ လေးသံ မြားသံကိုလေ့ နားထောင်ပါ။ ငါးစာကိုချည်း မကြည့်နဲ့၊ အထဲက ငါးမျှားချိတ်ကိုလဲ ကြည့်ပါလို့ ရင်ထဲက ဆန္ဒမှန်၊ ဆန္ဒမွန်နဲ့ အကြံပြုရင်း အဆုံးသတ်ပါရစေ..........။
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 02:16 Ingen kommentarer:
အောက်သားစစ်တပ်မာ အမျိုးကိုချစ်လို့ မိုင် ၁၀၀ လောက် ခြီကျင်လျှောက်ဖူးရေအကောင် တကောင်လေ့ မဟိ။ အောက်သားပြည်မာ မပြောကေ့ အဟြိတောင်အာသျှမာလေ့ တယောက်လေ့ မဟိ။
အာသျှတိုက်မာ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် မော်စီတုံး လီ(၈၀၀၀) ခရီးစွာ အရှည်ဆုံဖြစ်ပြီးကေ ဥက္ကဌကြီးခိုင်မိုးးလင်းဦးစီးဘနာ ကရင်ပြည်က ရခိုင်ပြည်ထိ ချီတက်ခရေ ခရီးစိုင်စွာ မိုင်ပေါင်း(၂၀၀၀)ကျော်ရေအတွက် အာသျှတိုက်မာ ဒုတိယအရှည်ဆုံးခရီးဖြစ်တေ။
ယင်း ခရီးစိုင်မာ လက်ဟိ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ဥက္ကဌကြီး ခိုင်ရဲခိုင်ပါရေ။
ယင်းဇူးနန့် အောက်သားတပ်မာ မိုင်တရာတောင် ခြီကျင်မလျှောက်ဖူးဘဲနန့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရာထူးယူထားကေ အကျွန်ရို့ဥက္ကဌကြီး ခိုင်ရဲခိုင်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမာ ဖီးဖီ ရာထူးကို အကျွန်ပီးလိုက်ပါရေ............။